Barnaamijka kulanka todobaadka oo looga hadlay magacaabista R/wasaaraha (Sawirro+Dhageyso) – Radio Muqdisho
Barnaamijka kulanka todobaadka oo looga hadlay magacaabista R/wasaaraha (Sawirro+Dhageyso)
Barnaamijka kulanka todobaadka ee ka baxa Radio Muqdisho ayaa todobaadkan looga hadlay magacaabista R/wasaaraha cusub Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke.
Barnaamijka ayaa waxaa marti ku ahaa wasiirro la soo shaqeeyay R/wasaarahaha magacaaban iyo aqoonyahano kale, kuwaasoo kala ahaa Prof. C/raxmaan Ibi, Dr. Khaalid Cumar Cali, iyo C/shakuur Mire Aadan oo ah saxafi aqoonyahana.
Barnaamijka ayaa waxaa lagu falanqeeyay magacaabista R/wasaaraha, fursadaha uu heysto, shaqooyinka adag ee horyaala, wax qabadka laga filankaro, caqabadaha ka hor imankara iyo arrimo kale.
Ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray dalka Djibuti.
Sii-hayaha Wasiirka Arrimaha dibada oo maanta ka sagootiyay shaqaale Wasaaradaasi ka tirsan oo Turkiga u aaday Siminaar